I-OpenGeo Suite: Umzekelo omkhulu we-GIS Software ucinga malunga nobuthathaka be-OSGeo-imodeli yeGeofumadas
Matshi, 2014 Geospatial - GIS, qgis
Njenganamhlanje, ubuncinci kwindawo yokusingqongileyo, zonke iingcali ezingathathi cala ziyaqonda ukuba isoftware yomthombo ovulekileyo ivuthiwe kwaye, kwaye ngandlela thile ingaphezulu, kwisoftware.
Isicwangciso semigangatho sisebenze kakuhle kakhulu. Nangona ulungelelwaniso lwayo lokuhlaziya ebusweni bamandla afunekayo kukuzivelela kwetekhnoloji kungathandabuzeki, mhlawumbi yayiyeyona nto eyabeka iziseko zokuqinisekisa impumelelo kwezinye iinzame ezinje ngoluntu, indlela yefilosofi, ezoqoqosho kunye nezinye izimvo ezazisetyenziselwa ukuthethelela imodeli. eziyimfuneko ekugqibeleni.
Nangona kunjalo, ukuthengisa izisombululo zoMthombo ovulekileyo akukho lula kushishino okanye kwimeko kaRhulumente, ngenxa yezizathu ezininzi ezivela ngokuyinxalenye kukhuphiswano kodwa nanjengesiphumo esingenakuphepheka sobuthathaka bemodeli, ekufuneka iguquke kwaye ihlale kunye nesoftware ephetheyo. Abenzi bezigqibo bazibuza imibuzo enje:
Ukuba ingxaki ivela ngenye intsasa ngenxa yohlaziyo olusuka kwamanye amaqonga, kwiinkalo ezifana nezokhuseleko, ngubani ophendula xa sifuna inkxaso, kwaye liphi ixabiso ukusishiya sibhajethelwe?
Ngokunikwa uluhlu lweendlela ezizezinye zolwimi, iilayibrari, izisombululo zabaxhasi, izisombululo zewebhu, yeyiphi indibaniselwano ekufuneka sikhethe ukuqinisekisa ukungqinelana? quasi iyonke?
I-OpenGeo Suite sisisombululo esingasebenzisi nje kuphela ukukhula okupheleleyo kwezixhobo ezikhoyo, kodwa ikwajolise ekuphenduleni kobo buthathaka kwimodeli. Ukongeza ekunikezeni abahlali isisombululo abanokuthi baphucule amanyathelo abo ophuhliso, kudala intambo efanayo yamacandelo abandakanyekayo ukukhokela indaleko yabo, kunye neenkampani, i-OpenGeo Suite ibonelela ngobunzulu obufunekayo ukuze kuthathwe isigqibo ngomthombo ovulekileyo. Nangona zikhona ezinye iinkampani, emva kwexesha lokuvavanya le ndlela ndingenayo enye indlela ngaphandle kokuqonda amandla aphezulu kunye nobuchule beengcinga ezisemva kweBoundless, inkampani eyenze esi sisombululo.
Makhe sibone ezinye zeendlela ze-OpenGeo Suite ezibonisa:
Zeziphi izixhobo ezibandakanya i-OpenGeo Suite?
Ukuba neendlela ezininzi zokukhetha isisombululo akukho kubi, kuyinto eqhelekileyo, nangona inzima indlela yokuqinisekisa ukukhethwa kwezixhobo kwiinkqubo zokudibanisa. Ukukhetha into engeyiyo kunokubiza imali eninzi xa sifumanisa ukuba sele sityalile imali kuphando, kuphuhliso, kuqeqesho kwaye ngaphezu kwako konke ukungafumaneki.
Umzekelo, kuphela kulwimi lophuhliso sinemifanekiso ebangelwa ziimfuno zoluntu, uninzi lwazo lusenza ngokufanayo, ezinye zilingisa kolunye ukunambitheka, ezinye zineempawu ezizodwa kwiinkqubo ezilula esingathanda ukuba nazo zonke. Masibone oku kwahlulwa ngokusebenza kunye neelwimi; Nangona kufuneka ndinyanisekile, ukwahlulwahlulwa ngokwamacandelo akukodwa kwaye kwezinye iimeko kunzima ukwahlula umda:
Kwinqanaba lomthengi, owona mxholo uthandwa kakhulu, zezi: QGis, Ingca, ILWIS, SAGA, Kapaware, esekwe kwi-C ++. gvSIG, Tsiba, iDIG, Kosmo, LocalGIS, GeoPista, SEXTANTE, esekwe kwiJava. Imephu yewindow yenxalenye yayo kwi-ActiveX esekwe kwiNET.
Kwiilayibrari esinazo: GDAL, OGR, PROJ4, FDO, GEOS kwi-C ++. I-GeoTools esekwe kwiJava, WKB4J, JTS, Baltic. NTS, GeoTools.NET, SharpMap ngaphezulu kweNET.
Ngokumalunga neenkcukacha, i-Postgres yeyona iphambili ngaphandle kokuthathwa, nangona zikhona nezinye izisombululo.
Oku kungasentla kusibonisa ukuba kunokwenzeka ukufaka inkqubo phantse kuyo nayiphi na imeko. Ngaphezu koko, uninzi lwabo, nangona bezelwe ngolwimi olunye, ngoku bayabaxhasa abanye. Uninzi lwazo luzelwe njengabaxumi kodwa banakho ukulawula idatha yewebhu kwaye kwiimeko ezinje ngeeVale eziVulekileyo kunokwenzeka ukuba zikhule kwindawo yewebhu phantse yonke into eyenziwayo kwisixhobo somthengi.
Nguwuphi umdibaniso wesoftware yasimahla oza kuyisebenzisa?
I-OpenGeo suite yagqitywa QGis Njengomthengi wedesktop, okwangoku ofanelwe kudidi lwamanqaku kwiGeofumadas. Kwiwebhu, bakhethe i-GeoServer njengeseva yedatha esebenza kwi-Tomcat, Jetty njengendawo yexesha lokusebenza kweJava, iGeoWebCache ye-tessellation kunye ne-OpenLayers njengethala leencwadi, nangona olu khetho lokugqibela lungenakho ukubhaliswa okunyanzelekileyo, kuthathelwa ingqalelo izisombululo ezinjengeLeaflet ekhula ngempumelelo enkulu, ngakumbi ngenxa yemodeli yayo. Ngokusekwe kwiiplagi kunye nokubanakho kwezicelo zeselfowuni Bona ukuba ungagqitha kumgca omnye wolwimi kodwa ndingathanda ukubona imatriki yohlalutyo ekhokelele kule nkcazo.
Masicace gca, nabani na angaziphumeza ezi sisombululo ngokukodwa. Yintoni equlethwe yi-OpenGeo sisifakeli esineenguqulelo zala macandelo kunye nophuculo lokwenza iindlela ezidinisayo zisebenze ngakumbi; umzekelo:
I-installer yenza indibano icoceke. Ukwazi ukukhetha ukuba yeyiphi into oza kuyifaka, uyisuse okanye uyikhuphe. Kulungiselelwe abo bajongane ne-injini yexesha lokusebenza kweJava ngeMpazamo eyonwabileyo engu-503 baya kukwazi ukuba luncedo.
Kukho abafakeli beefayile ezahlukeneyo IWindows, iMac OS X, i-CentOS / RHEL, iFedora, Ubuntu, kunye neeServer zesicelo.
Inguqulelo yakutshanje engu-4.02 izisa iPostgreSQL 9.3.1, iPostGIS 2.1.1, iGeoTools 10, iGeoServer 2.4.3 kunye neGeoWebCache 1.5; kwaye ixhasa i-OpenLayers 3.
Amakhonkco ngqo zenziwe kwimenyu yokuqalisa ukumisa okanye ukuqala iGeoServer kunye neePosi; kunye nokuphakamisa i-interface yomsebenzisi ukulayisha idatha yeefayile kwiPostgres (shp2psql) kunye nokufikelela kwi-database ye-PostGis (PgAdmin).
Kwimenyu yokuqalisa kukho ukufikelela kwi-localhost, ethi kule nguqulo isuse ujongano lomthengi wenguqulo 3, kunye nolawulo olucocekileyo lokuya kwiinkonzo zeGeoServer, GeoWebCache kunye neGeoExplorer.
Le mveliso, iGeoExplorer luphuhliso olunomdla lweeMida ezisekwe kwiGeExt esebenza njengombukeli wedatha weGeoServer, ivumela ukulayishwa kwedatha kwifayile yendawo okanye kwindawo yokugcina idatha, ekwazi ukumisela umbala, ubukhulu bomgca, ukungafihli, ileyibheli, kubandakanya imigaqo kunye nokugcina ngqo kwifayile yesitayile se-geoServer (sld). Akukho mntu kwingqondo yakhe efanelekileyo osebenza kule khowudi emsulwa kwaye iGeoExplorer sisisombululo esigqibeleleyo-nangona esenza izinto ezingakumbi-.
Inguqulelo efakiweyo yeGeoServer ibandakanya ikhonkco lokungenisa idatha, ekwaziyo ukwenza imvelaphi evela kubume bendawo, kubandakanya iPostGis apho idatha inokuhanjiswa isuswe kwesinye isiseko iye kwenye ibandakanyiwe kwi-Localhost iye kwinkonzo eyenziweyo; Kuyathakazelisa ukuba oku kulayishwa kwedatha kusombulula iingxaki ze-OGR2OGR, ngaphandle kokuba zenziwe ngomgca wekhonsoli, ukuphosa ubunzima xa kulayishwa umaleko we-multipolygon, kuba okungagqibekanga kuyipoligoni elula.
Kule meko, iinkonzo ze-WPS ziyavela kuba kukhetho lokufaka ndagqiba kwelokuba ndibadibanise.
Izongezo zeGeoServer ezinje ngeCSS Styling, CSW, Cloustering kunye nenkxaso yeelayibrari zemifanekiso ye-GDAL zinokongezwa ngexesha lofakelo. Kukho ukongezwa kwi-PostGIS exhasa amafu eenkcukacha kwi-database kunye ne-GDAL / OGR inokufakwa njengomthengi. Abaphuhlisi kukho ukhetho lokufaka i-Webapp SDK kunye neGeoScript.
Ngokungafaniyo nenguqulelo yam isingathwe kwiserver, ndiyabona ukuba kunokwenzeka ukuba kubekho imithombo yedatha, enokuthi ngokuqinisekileyo ingongezelelwa kodwa kwimeko yenguqulo eza kunye ne-OpenGeo Suite kuzisa isicatshulwa esilinganiselweyo, H2, H2 JNDI, Umncedisi we-SQL, I-OGR, i-Oracle kunye nezinto ezimbalwa ezinokubakho kwimvelaphi ebandayo.
Okona kulungileyo, kwiQgis benze iplagi enkulu ebizwa ngokuba yi-OpenGeo Explorer onokusebenzisana nayo kwindawo yokugcina idatha yePostgres kunye neGeoServer. Ukusuka apha ungahlela ii-slds, uhambise umaleko, amaqela maleko, uhlele amagama, ucime, jonga indawo yokusebenzela, iindawo ezigciniweyo, njl.
Ukuba ungqimba lususiwe, isarha isuswe; Yonke le nto iyalungelelaniswa kwaye ekugqibeleni ifezekisa umsebenzi kumthengi olawula okungaphezulu, ukuba ungqamaniso lunokusebenzisa i-REST API.
Okwangoku into engenayo yi-shp2psql kodwa ayindimangalisi ukuba kamva bayidibanise kwiphaneli enye, mhlawumbi icace gca njengesixhobo se-Spit esingafaniyo ne-UI egcina uxhulumaniso, ingalayisha indawo ezininzi kwibhlokhi, ibha yenkqubela phambili ingakumbi Eyona nyaniso kunye nemiyalezo eqondakalayo yempazamo.
Ngale Suite ye-OpenGeo ayitsho ukuba le yileresiphi yomlingo. Kodwa ngokuqinisekileyo iya kususa indawo enkulu yoluntu kule nketho, ngakumbi kuba iinkampani ezithengisa iikhosi ziya kukhetha ukufundisa le ndlela eqinisekisa ukuba kufutshane nokujikajika.
I-combo ihambelana namanye amathuluzi anokukhutshwa kwi-server.
Iyiphi impembelelo ezayo ne-OpenGeo Suite
Siza kubona ukuba oku kunefuthe elinjani eluntwini, kuba ngasemva kweBoundless kukho abantu abanamava amaninzi ebaleni, abathe babandakanyeka kuphuhliso lwezixhobo kunye namathala eencwadi athi ngoku enze ukuba icandelo lizinzile. Kodwa ngaphezulu kwako konke ngoqeqesho kushishino kunye neenkonzo zokuthengisa, ezihlala zichithelwa kwinqanaba lobugcisa. Ukukhankanya ubuncinci ubuncinci:
U-Eddie Pickle no-Ken Bossung, abasunguli be-IONIC, inkampani eyathenga i-ERDAS ngo-2007 kwaye ngoku ingumnikazi weLeica.
U-Andreas Hocevar noBart van den Eijnden, ababhaptiziweyo ekuphuhlisweni kwe-OpenLayers 2 kunye neGeoExt.
UVictor Olaya, oshiye elo lifa le-SEXTANTE,
UPawulos Ramsey, owokuqala kwe-PostGIS.
Enye igalelo elihle lo Okusemthethweni kwinkampani enkulu leyo ukuba ube unjengengwenya kwimarike apho kusoloko yomngcipheko, ezisa ukhuphiswano Okusemthethweni kwiinkampani kwicandelo lokushishina kwiindawo ezifana inkxaso, ukukholeleka, ukhuseleko kunye ukulawula umgangatho kwiinkqubela.
Iinkonzo ezinikezelwa nguMda ongenamda, ukusukela ekufudukeni kweqonga ukuya kwiinkonzo zenkxaso yonyaka, zibonakala ngathi ziyahambelana nemarike yeshishini kunye neyamaziko ayiqondayo kancinci umahluko phakathi kwenkxaso yendawo kunye nenkxaso yeshishini. Le marike akufuneki ibelula, kodwa sibona ngamehlo amahle indlela amaziko akhule ngayo kwingcinga, ukuxabisa uphuhliso lwesoftware kunye nolwazi njengeasethi, yiyo loo nto bekwazile ukusuka ekunikezeleni imisebenzi yeemoto kubaqhubi beemoto zabo, ekuqesheni iinshurensi ekhethekileyo kunye neenkonzo. yeenkampani zokuhambisa.
Kwimodeli yomthombo ovulekileyo, kukho ithuba kuye wonke umntu. Ke ziziphi izibonelelo ezingenamda ezikhoyo, nethuba lokwenza njalo ube ngumlingani; ngaphaya kwamandla abo banqwenela ukuphucula amandla abo okuthengisa iinkonzo malunga nokuphunyezwa, uqeqesho, inkxaso okanye uphuhliso. Umzekelo ubonakala ubalulekile kwaye ubonelela ngezifundo ezilungileyo zokufunda kunye nokuncedisa kumzamo owenziwe yi-gvSIG Foundation ngenye indlela, esiza kuthetha ngayo kwesinye isiganeko.
Landa i-OpenGeo Suite.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Isiguquli sasimahla kwi-Intanethi kwi-GIS-CAD kunye nedatha yeRaster
Post Next iingxaki Microstation e 8.5 7 WindowsOkulandelayo »
2 Iimpendulo kwi- "OpenGeo Suite: Umzekelo omkhulu weGIS Software ucinga malunga nobuthathaka bemodeli ye-OSGeo"
UJosé Pabón uthi:
Unomdla kubaPhuhlisi beSoftware phantsi kweOpengeo Suite yokusebenzisa ulawulo lwejogatial kwi-megaprojects zendlela
Alberto Altamirano uthi:
Ndiyabonga kakhulu kubahleli bakho. Ngokomntu, ndibafumana bephucula.
Uncedo lwakho lubalulekile ekuhlalutheni kwam kwaye kwenziwe izigqibo.